Daloolinta lafaha isdhaafka badan - daloolinta daloolinta caafimaadka - daloolinta craniotomy
RJ-PD daloolin caafimaad oo koronto ah
Daloolin daloolin / daloolin daloolin
Shidaalka Gubashada Acetabulum
Daloolinta lafta Micro
Nooca Micro qalliinka lafdhabarta
RJ-PS miisaanka korantada ee caafimaadka
Mashiinka korontada lagu arko
Miisaanka Sternum / miinshaar soo celinta
Micro miinshaaro oscillating
RJ-MP Medical Electric waxay arkeen daloolin
Nidaamka qodista korontada lagu arko
Daloolin Micro miiska
Nidaamka wax lagu qodaa ee Cranial
Wuhu Ruijin Qalabka Caafimaadka & Qalabka Co., Ltd.
leran ka badan nala soo xiriir
e aaladaha korantada lafaha
s qalabka korontada lafaha
Kuu siinayaa alaabada aad u baahan tahay
ND-2511 Qashin Qubka
Qoditaanka daloolinta cusub ee la soo saaray waxaa badanaa loo isticmaalaa qabashada siligga k, qalliinka dhejiska ee qalliinka ciddiyaha iyo qalliinka arthroscopic. Waxay iska caabin kartaa heerkulka sare iyo cadaadiska sare ilaa 135 sentigrade. Ka sokow, waxaan bixin karnaa isdhaafsiyo kala duwan sida AO, Stryker, Hudson iwm
SS-1011 Sawirka Oscillating
Mashiinka lafaha wareegaya ee biraha burushka ah ee cusub ee S, oo ka kooban gacan-qabsi, xeedho, baytariyada iyo garbaha lagu arko, ayaa inta badan loo adeegsadaa qalliinka wadnaha iyo jilibka. Mashiinka la soo dhoofiyo ayaa ka dhigaya hawlgalka mid wax ku ool ah oo sax ah; naqshadeynta ergonomic waxay sameysaa dareemid raaxo leh; Awood batteriga oo weyn wuxuu sameyn karaa awood adag oo qancisa baahida macaamiisha.
fiidiyow hordhac ah
Waxbadan ka baro shirkadeena
Faham cad oo ku saabsan waxyaabaha ka jira shirkadda
Soo saaraha hormoodka u ah qalabka korontada lafaha.
Ruijin waa shirkad isku dhafan ee sayniska, warshadaha iyo ganacsiga, inta badan soosaarida miinshaarka korantada ee caafimaadka & daloolinta aaladaha orthopedic oo udhaxeeya miinshaarada dhalada caafimaadka, daloolinta lafaha caadiga ah, miinshaar oscillating, daloolin laylis ah ilaa dhuuqo acetabular reamer, miinshaar lafa yar, miinshaar sternum, nidaamka cranial iyo miinshaar multifunctional miinshaar iwm, oo dhammaantoodna waxaa si ballaaran loo dabaqay noocyada hawlgallada orthopedic.
Ku saabsan RuiJin
Bandhigga faa'iidada Ganacsiga
Soo saaraha xirfadlaha ah, tayada aan fiicnayn, adeegga saacadaha 24 ee khadka tooska ah.
Dadaal aan kala go 'lahayn oo dhammaan shaqaalaha Ruijin, waxaan ku helnay horumar weyn inkasta oo saddex iyo tobankii sano ee la soo dhaafay.
Waxaan ku adkeysaneynaa "Tayada waxay raadineysaa badbaado & maareynta ayaa raadineysa horumar."
Kooxda Heerka Sare
Waxaan haynaa koox naqshadeyn wanaagsan si loo soo saaro alaabooyin cusub.
Waxaan helnay shahaadooyinka ENISO 1 3 4 8 5: 2 0 0 3 & CE0123 oo ay sii deysay Jarmalka TUV.
Waxaan haynaa qalab casri ah si loo hubiyo tayada & wax soo saarka.
Waxaan bixinaa adeegga iibka kadib si loo xalliyo dhammaan dhibaatooyinka soo socda.
La soco wararka warshadaha
Saynisyahannadu waxay horumariyaan noolaha casriga ah ee dardar geliya lafaha ...
Saynisyahannadu waxay soo saareen biomaterial cusub oo ka caawiya lafaha inay bogsadaan ...
Nuvasive Oo Bilaabaysa Saxanka Adkaynta Dhererka T ...
NuVasive's Limb kordhinta Saxanka Saxarada / ...
Fahanka cusub ee cudurada lafaha
Daraasadu waxay muujineysaa doorka hidda-wadaha unugyada culeyska dareema ee koritaanka lafaha; c ...
SS-3031 Sawir Dib-u-habayn ah
NS-3532 Sawirka Sternum
NS-3531 Sawir celinta
NS-3032 Sawirka Sternum
NS-3031 Sawir celinta
Batroolka NS-2011 Lithium wuxuu ku shaqeeyaa 360 ° Roating Mi ...
Marka loo eego Baahiyahaaga, adiga kuu habee, oo ku siiya alaabooyin aad u qiimo badan.
Cinwaanka: N0.33 wanchun road, Wuhu, Anhui, China